Daaweynta Proton - Daaweynta Kansarka Carruurta - Proton California
Daaweynta Proton ee Kansarka Caruurta
La dagaallama Kansarka Caruurta la mid ah Precision Laser-like
California Protons, waxaan ku dadaaleynaa iskaashi dhow oo dhexmara bukaanka, waalidiinta iyo dhakhaatiirta si loo abuuro qorshe daaweyn shaqsiyeed ee ku habboon baahida gaarka ah ee ilmaha. Farsamaynta iskaanka teknolojiga sheybaarka qallalan ee qaab-awoodeedu culus yahay waa nooc aad u sax ah oo lagu daweeyo shucaaca kansarka kaasoo u saamaxaya dhakhaatiirteena inay si aad ah u bartilmaameedsadaan burooyinka carruurta ee qaddarka aad loo xakameeyo. Tani aad bay qiimo ugu leedahay carruurta iyo dhallinta aan weli sii korayn, aad ugu nugul shucaaca ee ay la kulmaan halis weyn ka-soo-gaadhista shucaaca.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee faafidda dawooyinka proton-ka ee faafa, teknoolajiyada baarista qalin-jabinta waxay si sax ah u gaarsiineysaa shucaaca proton shucaaca gudaha 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabyada burooyinka caruurta iyadoo loo yagleelayo lakab hoose waxaanna yareyn karnaa la kulanka waxyeelada unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha jirka. Markii aan si toos ah u dhigno qaybta tamarta ugu badan ee qaddarka burada, waxaan yareyneynaa soo-gaadhista unugyada caafimaadka qaba iyo dhibaatooyinka la xiriira ee sababi kara dhibaatooyinka mustaqbalka, oo ay ku jiraan korriinka is-yaraanta, garashada garaaca iyo kansarka shucaaca sare ee shucaaca. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suurtagalnimada in carruurtu ku dhammaystiri karaan daaweynta iyada oo yareynaysa carqaladeyn ama dib u dhac, firfircoonidoona ay sii wataan howlahooda caadiga ah.
Kansarka Caruurta Proton
Faahfaahinta Daaweynta Daaweynta
Noocyada Kansarka Caruurta Daweynta
Astrocytoma iyo gliomas kale, oo ay ku jiraan waddo optic / hypothalamic glioma, oligodendroglioma, oligoastrocytoma, anaplastic astrocytoma
Burooyinka ku-meel-gaarka ah ee burooyinka loo yaqaan Teratoid / Rhabdoid
Burooyinka unugyada jeermiska unugyada gudahooda (jeermiin)
Cudurka loo yaqaan 'Nasopharyngeal carcinoma'
Ewing's sarcoma / Burada neuro-ectodermal buro (PNET)
Sideen ula dhaqannaa Kansarka carruurta
Ka ilaali unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha ku xeeran
Joogtee tayada ilmaha noloshiisa inta lagu jiro daweynta
Yaree dhibaatooyinka soo raaca ee daaweynta shucaaca, oo ay ku jiraan koritaanka is-hoos-u dhaca, daciifnimo xagga garaadka ah, lumis maqal iyo arrimaha hormoonnada
Wada-hawlgalayaashayada Daryeelka - Isbitaalka Carruurta ee Rady
Kooxdeena California Protons waxay shuraako la yihiin Rady Children's Hospital kansarka shucaaca carruurta, kalkaaliyeyaasha suuxinta carruurta iyo kalkaalisooyinka caafimaadka carruurta sidaa darteed carruurta waxaa daryeela khubarada caafimaadka carruurta tallaabo kasta oo jidka ah. Intaa waxaa sii dheer, bukaannadeenna da'da yar waxay leeyihiin albaab u go'an oo lagu dhiso, meel carruurtu ku cayaarto, beerta bannaanka lagu bogsado iyo qolkooda dib-u-soo kabashada oo ka gooni ah bukaannadeenna waaweyn.
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Caruurta
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u soo bandhigaan shucaac heer sare ah kansarka burooyinka iyo unugyada kansarka, ayna yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Saxnaanta saxda ah ee sawir qaadka qalin-jabinta wuxuu u keenayaa faa'iidooyin aad u weyn bukaannada carruurta. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay kansarka maskaxda iyo laf-dhabarka. Bartilmaameedka maskaxda ee macnaheedu wuxuu yahay in neerons-yada soo koraya ay yaraadaan shucaaca waxyeellada leh. Laf dhabarta, saxitaankani wuxuu u tarjumaa shucaac yar unugyada ku xeeran, sida wadnaha, sambabaha, caloosha iyo xubnaha taranka.
Awoodda daaweynta ee 'Proton therapy' inay ka ilaaliso unugyada caafimaadka qaba shucaaca waxay yareynaysaa halista hoos u dhaca garashada carruurta iyo dhalinyarada leh Ependymoma, oo ah buro maskaxeed guud oo xun. Marka lagu daaweeyo shucaaca caadiga ah ee raajada, wuxuu carqaladeyn karaa horumarka maskaxda wuxuuna wiiqi karaa awoodaha kale ee garashada.
Marka la barbar dhigo protons-ka faafa ee baahsan, daaweyntayada proton ee carruurta ayaa ballaarineysa xulashooyinka daaweyn ee lagu daaweynayo noocyo badan oo burooyin ah iyo burooyin qaabab aan caadi aheyn, oo ay ka mid yihiin burooyinka ay adagtahay in la gaaro ee u dhow xubnaha muhiimka ah. Kansarrada firfircoon ayaa sidoo kale lagu daaweyn karaa qiyaaso badan iyo kansarka soo noqnoqda ayaa lala beegsan karaa in kasta oo daaweyno hore oo shucaac ah.
Xaq Ma U Leedahay Ilmahaaga?
Sababtoo ah bukaanleyda carruurtu waxay u nugul yihiin daaweynta shucaaca, daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy' waxay noqon kartaa xulasho wax ku ool ah kansar badan. Carruur iyo dhalinyaro badan ayaa u dulqaata daaweynta proton-ka, si kastaba ha noqotee, jawaabaha shaqsiyadeed way kala duwanaan karaan. Tirada iyo dhererka daweynta ayaa isbadali doonta iyadoo ku saleysan nooca kansarka. Iyada oo ku xidhan marxaladda iyo nooca, daaweynta isku-jirka ah ee qalliinka, kemotherabi iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka carruurta. Fursadaha daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka, da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Medulloblastoma waa buro maskaxda ku dhacda oo ku bilaabata salka qallooca oo ku faafi kara qaybaha kale ee maskaxda iyo xudunta. Daaweyntu badanaa waxay kujirtaa iskudhaf qaliin, kemotherabi iyo shucaac dhamaan maskaxda iyo lafdhabarta. Daaweynta 'Proton therapy' waa mid faa'iido weyn u leh daweynta medulloblastoma ee carruurta maxaa yeelay waxay ka hortegi kartaa qaddarka shucaaca ee wadnaha, sambabaha, mindhicirka iyo unugyada kale ee caadiga ah. Adoo xaddidaya shucaaca, daaweynta proton wuxuu yareynayaa waxyeelooyinka muddada-gaaban iyo halista muddada dheer ee dib-u-dhaca ama horumarka xubnaha aan caadiga ahayn, kansarka sare, cudurrada wadnaha iyo sambabbada, sameynta unugyada nabarrada iyo koritaanka go'ay.
Burooyinka 'ependymoma' waxay badanaa ku samaysmaan gobolka maskaxda gudaheeda waxayna saameyn ku yeeshaan unugyada ku jira nidaamka neerfaha dhexe. Daaweyntu badanaa waxay ku lug leedahay qalliin, oo ay ku xigto shucaac. Daawada loo yaqaan 'Proton therapy' waxay u oggolaaneysaa bixinta saxda ah ee qaddarka sare ee shucaaca ee loo baahan yahay si loo xakameeyo buro. Tani waa mid muhiim ah, marka loo eego isku dhowaanshaha maskaxda, maskaxda, xarigga laf-dhabarka iyo taraafikada indhaha. Qaabdhismeedyada xasaasiga ah ee neerfaha waxay sidoo kale u baahan yihiin taxadar gaar ah si loo hubiyo inaysan waxyeello ka soo qaadin qiyaasta shucaaca xad-dhaafka ah.
Burada Germinoma iyo burooyinka unugyada jeermiska unug ee jeermiska-aan-jeermiska lahayn (NGGCT) waa burooyinka maskaxda ee ku dhaca unugyada jeermiga waxayna ku badan yihiin carruurta iyo dadka waaweyn. Waxay kuxirantahay nooca burada, daaweyntu way kala duwanaan kartaa, laakiin badanaa waxay kujirtaa xoogaa iskudhaf ah qalliin, kemotherapy iyo shucaac. Daaweynta 'Proton therapy' waxay si aad ah hoos u dhigeysaa xaddiga unugyada maskaxda ee caadiga ah ee la kulma saameynta daaweynta shucaaca. Waxay sidoo kale keydisaa unugyada kale ee caadiga ah iyo xubnaha agagaaraha aagagga khatarta ugu jira xannuunka dheeriga ah una baahan daaweyn, sida wadnaha, sambabbada iyo mindhicirka, nidaamka marinnada marinnada marinnada oo dhan iyo dhididka wadnaha.
Bakteeriyada loo yaqaan 'Lymphoma' waa nooc kansar oo ka bilaabma unugyada habka difaaca jirka. Daaweyntu guud ahaan waxay kujirtaa iskudhaca kiimikada iyo shucaaca. Sababtoo ah limfiyo badan ayaa ku lug leh aagga xabadka, daaweynta proton waxay waxtar u yeelan kartaa bukaanka carruurta, sababtuna tahay awooddeeda sare ee looga taliyo wadnaha, sambabbada, naasaha iyo lafdhabarta shucaaca aan loo baahnayn. Adoo xaddidaya qiyaasta shucaaca, daaweynta proton ee carruurta ayaa sidoo kale yareyn doonta saameynta mustaqbalka ee shucaaca, sida cudurka wadnaha ama sambabbada, kansarka sare iyo koriinka oo istaaga.
Daaweynta Caruurta Proton
Daaweynta kansarka Soo noqnoqda
Daaweynta 'Proton therapy' badanaa waa sida ugu wanaagsan ee loo daweeyo burooyinka soo noqnoqda Aagagga hore looga daaweeyay daaweynta shucaaca ee caadiga ah.
Daaweynta daaweynta Proton ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protons ee San Diego waxay bixin kartaa natiijooyin la mid ah tan shucaaca-raajada, iyadoo la yareynayo saameynta mustaqbalka ee nolosha halis gelisa sida koritaanka is-go'da, garashada garaadka, maqal la'aanta iyo arrimaha hormoonnada dartood. shucaac ku dhaca unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada fursadaha hoose ee kansarka sare nolosha dambe sababta oo ah yareynta soo-gaadhista shucaaca ee unugyada caafimaadka qaba iyo xubnahaaga.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan daaweynta kansarku waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido-darro. Hubso inaad kala hadasho dhammaan khataraha ka imaan kara, iyo waliba ikhtiyaarada daweynta, kala-hadal canuggaaga cilminafsiga.
Waxaan door bidnay daaweynta proton sababta oo ah awooda ay si amaan leh ugu dhex gasho maskaxda maskaxda si ay u gaarto qeyb buro oo aan horey loo taaban karin. Iyo maadaama tikniyoolajiyadda California Protons ay tahay tan ugu cusub uguna horumarsan dalka, waxaan u maleynay 'maxaa meel kale u aadaysa?'
Aabaha Natalie Wright
Bukaanka Bukaanka Maskaxda ee Maskaxda Caruurta
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton ee Kansarka Caruurta
Isbarbardhiga qiyaasta qiyaasta qiyaasta proton iyo xoogga shucaaca ee codka 'photon radiotherapy' ee daaweynta rhabdomyosarcomas pediatric paramatriceal rhabdomyosarcomas
Daaweynta shucaaca ee proton ee loo yaqaan 'ctoniopharyngioma' ee carruurta: warbixin horudhac ah
Cilmiga jir ahaaneed iyo caddeynta muuqaalka shucaaca ee masaafada fog ee loo yaqaan 'proton beam' ee marinka cirridka.
Daawada shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiotherapy' ee kaadiheysta caruurta / qanjirka 'prostate rhabdomyosarcoma': natiijooyinka kiliinikada iyo qiyaasta daawada marka loo barbar dhigo xooga daaweynta daaweynta shucaaca
Qorshaynta daaweynta leh protons ee loogu talagalay carruurta 'retinoblastoma', medulloblastoma, iyo miskaha sariirta: sidee bay protons u barbar dhigaa farsamooyinka kale ee is waafajinta?
Fahmitaanka saameynta garashada ee carruurta lagu daaweeyo medulloblastoma